Shirka Jowhar: Qaar ka mid ah Ergada oo Caasimad u Codeeyey
Qaar ka mid ah ergada shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe oo maalmahii ugu dambeyay dood ka lahaa dastuurka maamulka ayaa maanta u codeeyay in Jowhar ay noqoto caasimadda maamulkaas.
Ergada madasha joogtay oo tiradoodu ka badneyd ilaa 200 ayaa cod gacan tag ah ku aqbalay in Jowhar ay noqoto xaruunta maamulka Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe
Qodobka 4-aad ee cutubka 1-aad ee qabyo qoraalka dastuurka loo qeybiyay ergada ayaa waxaa ku qoran magaalo madaxda iyo xarunta maamulka, waxaana xubinta ugu horeysa ay ka codsanaysaa ergada inay soo buuxiyaan halka ay noqoneyso.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sanadkii hore wareegto ku magacaabay in magaalada Boulo-Burte ay noqoto xaruunta maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, Jowhar-na gogosha shirka la dhigo.
Weli ma cadda in u codeyntan ay tahay mid rasmi ah iyo in kale.
Saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha oo VOA la hadlay waxey sheegeen in codeyntu ay dhacday laakiin aaney weli natiijada rasmiga ah soo saarin.
Codeyntan ayaaku soo beegmeysaa iyadoo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan ay shirkan ka maqan yihiin iyagoo tabanaya waxey ugu yeereen cadaalad darro.
Wariyeheenna Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arrintan ka wareystay. Yaxye Cali Ibrahim Xoghayaha Joogtada ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya, kana mid ah masuuliyiinta shirka Jowhar sida weyn ugu howlan.
Wareysi: Shirka Jowhar